Tag: hootsuite | Martech Zone
5 Ngwaọrụ dị egwu maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya
Tuesday, January 23, 2018 Jessica ifdị
Ana m ewere onwe m dị ka onye pere mpe na azụmaahịa ọdịnaya. Achọghị m kalenda kalenda, ndị nhazi oge na ngwa ọrụ na - esiri m ike — nye m, ha na-eme ka usoro a gbagwojuru anya karịa ka ọ dị. Ghara ikwu, ha na-eme ka ndị ahịa ọdịnaya ghara isi ike. Ọ bụrụ na ị na-eji ọnwa isii ọdịnaya kalenda atụmatụ ngwá ọrụ-na ụlọ ọrụ gị na-akwụ ụgwọ maka-ị na-eche na ụgwọ gị na-arapara n'ahụ niile nkọwa nke atụmatụ. Agbanyeghị, ndị na-ere ahịa ọdịnaya kacha mma dị agile, dị njikere ịgbanwe ọdịnaya dịka usoro
Etu esi tụọ ma melite atụmatụ azụmaahịa Twitter gị
Thursday, May 4, 2017 Thursday, May 4, 2017 Douglas Karr
E nwere bụ bụghị nke ukwuu ozi ọma na Twitter n'ihu na m nwere na-anụ azụ si Jack na m Open Letter na Twitter. Nke ahụ kwuru, m ka na-eji Twitter kwa ụbọchị, na-ahụ uru n'etiti mkpọtụ na-adịghị mma, ma na-achọ ka ọ gaa nke ọma. You nwere ike iji Twitter iji nyere aka kwalite njirimara gị, akara ụlọ ọrụ, ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ gị? N'ezie! Pasent XNUMX nke ndị ọrụ achọpụtawo azụmaahịa ọhụrụ pere mpe ma ọ bụ ọkara na Twitter, na nke
Thursday, May 4, 2017 Thursday, May 4, 2017
Ntuziaka 3 maka ndị ahịa iji chekwaa okwuntughe mgbasa ozi mmekọrịta ha
Sunday, Eprel 30, 2017 Tuesday, May 2, 2017 Douglas Karr
Maka izu gara aga, anyị na-anwa ị nweta paswọọdụ maka akaụntụ Youtube nke onye ahịa. Onweghi ihe na - eme ka oge ma ọ bụ oge ju mmadụ iwe karịa ime nke a. Nsogbu bụ na onye ọrụ nke naanị jikwaa akaụntụ ahụ hapụrụ ụlọ ọrụ na mberede - na ọ bụghị na usoro kachasị mma. Anyị mere ike anyị niile dịka onye ogbugbo iji gbalịa weghachite paswọọdụ ahụ, mana ha kwuru na ha amaghị ihe ọ bụ ọzọ. Nke
Sunday, April 30, 2017 Tuesday, May 2, 2017
Tinye Tweetwall na Ihe Omume Gị na Hootfeed
Mọnde, Jenụwarị 26, 2015 Sunday, Jenụwarị 25, 2015 Douglas Karr
You nwetụla mgbe ị chọrọ nwere a Tweet mgbidi gị ọrụ ma ọ bụ na ihe omume? Enwere ọtụtụ ngwọta dị na ya, mana ọ nweghị nke nwere ike ịdị mfe iji dị ka Hootsuite's Hootfeed. HootFeed bụ ngwa dị mfe iji hazie, nke na - emegharị ọrụ Twitter nke ị na - eche maka ibi ndụ; na-agba ndị ọbịa gị ume ka ha na ndepụta mmemme ahụ mee ihe. Site n'igosipụta visual Tweets na ngebichi gburugburu ihe omume gị, ị mepụtara mgbidi Tweet nke gị
Monday, January 26, 2015 Sunday, January 25, 2015
Riffle: Nweta Chrome Chrome a ngwa mgbakwunye ugbu a!
Thursday, August 21, 2014 Tọzdee, Eprel 7, 2016 Douglas Karr
Naanị m dere banyere ịhụnanya m nwere na Twitter na ịkekọrịta di na nwunye nnukwu ngwaọrụ maka ijikwa ndị na-eso Twitter gị. Nke a bụ ngwaọrụ ọzọ mara mma nke m chọpụtara ugbu a! Riffle by CrowdRiff bụ ngwa mgbakwunye Chrome na-agbakwunye pane dashboard Twitter nke na-enyere gị aka ịmata ma nyochaa ozi na onye ọrụ Twitter. Riffle na-enye ozi gụnyere ọrụ, ntinye aka nke akaụntụ ahụ, isi iyi nke tweets yana aha ha na mmekọrịta ha.
Thursday, August 21, 2014 Thursday, April 7, 2016
Ofwa nke Social Media Monitoring na Analytics
Monday, August 11, 2014 Tuesday, July 5, 2016 Douglas Karr
Ihe mbu nke ihe omuma banyere ihe omuma a bu ihe na-adọrọ adọrọ… uto nke ngwa oru nyocha. N'uche nke m, ọ na-arụtụ aka n'okwu metụtara di na nwunye. Nke mbu bu na anyi nile ka na acho ngwa oru ka nma ikwuputa ma leba anya na uzo ahia anyi na nke abuo bu na anyi di njikere itinye oke onu ahia nke ahia ahia anyi iji hu na usoro anyi na aru oru. Ka anyị na-eji soshal midia jikọọ ndị ọzọ, anyị
Monday, August 11, 2014 Tuesday, July 5, 2016
CoPromote: A Social Nkwalite Platform maka nkwusa
Sunday, May 4, 2014 Saturday, May 17, 2014 Douglas Karr
CoPromote bụ ebe ahịa na-elekọta mmadụ ebe ndị ọrụ na-ahọrọ ịkekọrịta ọdịnaya ibe ha. CoPromote bụ netwọkụ nke ndị nkwusa na-akwado ibe ha. Fọdụ n'ime atụmatụ ndị dị na CoPromote na-enyere akara / ndị okike ọdịnaya aka ịbawanye nri ha gụnyere: Ebumnuche - Ndị otu CoPromote niile debanyere ọrụ ahụ na ebumnuche ịkekọrịta ozi ọzọ, ebe na Facebook, ịkekọrịta ọdịnaya nke atọ bụ nke abụọ- uche. Njikọ aka - Onu ogugu onu ogugu na
Sunday, May 4, 2014 Saturday, May 17, 2014
25 Awesome Social Media Ngwaọrụ
Satọdee, Nọvemba 2, 2013 Douglas Karr
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta dị iche na ebumnuche ha na atụmatụ ha. Ihe omuma ihe omuma a nke 2013 Social Media Strategies Summit mebiri edemede nke oma. Mgbe ị na-eme atụmatụ atụmatụ mmekọrịta mmadụ na ụlọ ọrụ, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ ndị dị maka njikwa mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike ịba ụba. Anyị achịkọtara nnukwu ngwaọrụ 25 iji mee ka gị na ndị otu gị bido, kewaa ụdị ngwaọrụ 5: Ntị gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkparịta ụka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mmekọrịta ọhaneze, nchịkọta mmadụ.